Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Vidin-tsolika: Miala any ny voka-dratsiny voalohany
Inty sy Nday: Vidin-tsolika: Miala any ny voka-dratsiny voalohany
Ny hisorohana ny fipoahana ara-tsosialy na ny hatezeram-bahoaka no voalaza fa antony namerenan’ny fitondram-panjakana ny vidin-tsolika tamin’ny faha-2 aprily teo ho toy ny tamin’ny volana martsa, raha nisy ny fampiakarana azy 90 Ariary ny 1 Aprily. Dia mihevitra ny mpitondra fa ho faty tamin’izany ny afo, ka ny faha-9 aprily, herinadro taty aoriana, dia indro fa nakarina indray ka mba tsy 90 Ariary ny fiakany fa 70 ariary.
Na ny vidin-tsolika tamin’ny volana martsa na ny tamin’ny volana janoary dia efa tsy takatra ny ambanilanitra, nefa dia niezaka nangina aloha ny vahoaka satria manana ny fotoanany ny zavatra rehetra. Efa azon’ny maro an-tsaina fa ny mpitatitra no voalohany tsy hahazaka an’io fiakatry ny vidin-tsolika io ka ho an’ny eto andrenivohitra àry dia omaly ny nanatanteraka ny fivoriam-beny ny Vondron’ireo orin’asam-pitaterana iombonana eto andrenivohitra (Uctu) ka nanapa-kevitra fa “afaka tapa-bolana, izany hoe ny faha-25 aprily dia hakarina hjo 700 ariary ny saran-dalana amin’ny fiara iombonana (Taxi-be) eto andrenivohitra sy ny manodidina.”
“Tsy misakana ny fahafahanay miroso amin’ny fifampidinihana amin’ny fanjakana anefa izany”, hoy hatrany ity vondron’orin’asam-pitaterana eto andrenivohitra ity. Isan’ny mbola nampiakaran’ny Uctu feo omaly koa moa ny tsy mbola nahavitan’ny fitondram-panjakana nanefa ny vola fanalefahana ny fiakatra ny vidin-tsolika (subvention compensatrice) tamin’ny taona 2016-2017. Omaly moa dia nisy taratasy avy amin’ny fitondram-panjakana tonga tany amin’ny Uctu izay karazan’ny mampandry adrisa ihany fa hoe “haloa ny momba io vary mangatsiaka tamin’ny 2016-2017”. Nomarihin’ny mpikatroka ao amin’ny Uctu fa “tsy mihemotra amin’ny fanapahan-kevitra ho amin’ny fampiakarana ny saran-dalana ho 700 Ariary izay mety ho fifampidinihana amin’ny fitondram-panjakana”. Raha ny fantatra omaly ihany moa dia niarahan’ny Uctu nanapaka tamin’ny fikambanana miaro ny zon’ny mpanjifa io fanondrotana ny saran-dalana ho 700 Ariary io. Ny dikan’izany dia tsy tokony hifandrafy aloha ny mpanjifa sy ny mpitatitra fa tokony ho mpirahalahy mianala, ka ny iray tokin’ny iray, ary ny iray andrin’ny iray.
Io fiakaran’ny saran-dalàna io izany no voka-dratsy voalohany nateraky ny fanapahan-kevitra tsy mitsinjo vahoaka noraisin’ny fitondram-panjakana, dia ny fanondrotana ny vidin-tsolika.
Ny ho akon’izany dia ny ho fiakatry ny mason-karena rehetra amin’ny fandraharahana ka hiantefa mivantana any amin’ny vidin’entana io ako io, dia hiakatra avokoa ny vidim-piainana izany.
Ny karama anefa, tsy hita voaka izay mba ezaka ny mpitondra fanjakana manatsara azy io. Raha vola hanaovana kolikoly avo lenta dia mahita an’aliny tapitrisa ao anatin’ny 24 ora ny fitondrana. Raha vola hozaraina amin’ny olona taomina hanotrona ny hetsika ataon’ny mpitondra, toy ny teny amin’ny lapan’ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena teny Mahamasina ny sabotsy teo (Rodobe ho an’ny fisandratana), dia poa toa izay no ahitan’ny mpitondra azy… fa raha vola hikatsahana vahaolana hanalefahana ny vaikan’ny fidangan’ny vidim-piainana, na vola hanampiana ny karaman’ny mpiasa, dia mihodinkodina ny mpitondra.
Noho izany, mitombo hatrany ny hadalana sy ny porofo manamarina ny tsy fahaizan’ny mpitondra fanjakana mitantana ny raharahama-bahoaka. Mitombo hatrany ny singa itarafan’ny vahoaka fa mpitondra tsy mikatsaka ny soa ho an’ny vahoaka no mitana ny fahefam-panjakana eto. Miseho lany hatrany ny endrika ibaribarian’ny fanararaotam-pahefan’ny mpitondra sy ny tsikombakomba ifanaovanay amin’ny sokajin’olona na sokajin’asa ahitany tombontsoa manokana, toa itony fanondrotana ny vidin-tsolika itony. Tohizo hatrany, ry mpitondra isany, ny tsy firaharahana ny vahoaka a ! Ianareo ihany no hizaka tsy ho ela ny vokatr’izany.